Fahad Yaasiin oo u ambabaxay Qadar iyo Somalia oo Qatar Diblomaasiyadeed wajahaysa. – Hornafrik Media Network
Agaasimaha Madaxtooyadda Somalia, Fahad Yaasiin ayaa u ambabaxay maanta Magaaladda Doha ee Wadanka Qadar, si halkaasi uu ugula saxiixdo Heshiisyo Qarsoodi Dawladda Qadar oo xiriirka ay u jareen Wadamadda ugu tunka wayn Khaliijka.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Socdaalka Fahad oo aan la shaacin uu la xiriiro in Somalia ay si toos ah ugu biirto Isbahaysiga Qadar iyo Turky oo ay is hayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxaana uu la saxiixan doonaa Qadar Heshiis rasmiya oo arrintaasi la xiriiro.
Heshiisyadda noocan ah oo ay ahayd inuu saxiixo Wasiirka Arrimaha Dibadda Somalia ayaan laga tala galin. Waxayna Illo Wareedyo ka ag dhaw Madaxtooyo xaqiijiyeen in Heshiisyadda uu saxiixayo aysan waxbka ka ogayn Xukuumadda uu hogaamiyo Khayre.
Fahad Yaasiin waxa uu sidoo kale inta uu joogo Qadar uu la kulmi doonaa Saraakiil Ruush ah oo ay ka wada hadli doonaan sidii Heshiisyo Hub iibsasho ah ay Somalia ula gali lahayd Ruushka, iyadoona Heshiisyadan uusan waxba kala socan Wasiirka Gaashaandhiga Somalia. Waxaana heshiisyadan oo dhan Garwadeen ka ah Dawladda Turky oo xiriir dhaw la leh Somalia.
Fahad Yaasiin oo horay uga tirsanaa TV ga Aljazeera ee ay Qadar maalgaliso waxaa la aaminsan yahay inuu gacan saar la leeyahay Dawladda Doha. isla markaana uu yahay Xiriiriyaha Qadar iyo Ururadda Islaamiga ah ee Somalia oo qaarkood ay yihiin Xagjiriin dagaal kula jira Dawladda Somalia. Waxayna Dad badan aaminsan yihiin in inta uu joogo Madaxtooyo Fahad Yaasiin inuu u shaqayn doono sida Diblomaasi Wakiil ka ah Qadar.
Somalia ayaa hadda u muuqata inay wajahayso Culays Diblomaasiyadeed oo kaga imaan doona Wadamadda Sucuudiga iyo Imaaraadka oo taageero dhaqaale siin jiray Dawladda Somalia. Waxaa sidoo kale cabsi laga qabaa in Wadamadda Khaliijka ay go’doomiyaan Somalia oo ay Ganacsigeedu ku tiirsan yahay Imaaraadka.
Ma jiro wax war ah oo Madaxtooyadda Somalia ay ka soo saartay socdaalka Fahad Yaasiin ee Qadar. waxayse arrintani sii xumaanaysaa Xiriirka Somalia ay la lahayd Wadamadda Khaliijka oo aan wanaagsanayn tan iyo markii ay Dawladda Muqdisho ku dhawaaqday inay dhex dhexaad ka tahay Khilaafka Carabta.
>Maxaad ka ogtahay Doorka Urur Diimeedyadu ku yeesheen Madaxtooyadda Somalia